février | 2019 | InfoKmada
Fahatratrarana andramena tany Singapour : mifoha eny amin’ny fitsarana ny raharaha ankehitriny
InfoKmada - 28 février 2019 0
Mifoha eny anivon'ny Haute Cour de Justice ny raharaha momba ny fanondranana bolabolana andramena antsokosoka izay nataon'ireo tomponandrakitra ambony teto amin'ny firenena tamin'ny fitondrana teo aloha.Bolabolana andramena miisa 30 000, miteti-bidy hatramin'ny 50 tapitrisa dolara tratra tany Singapour.
Zaridainan’Ankorondrano : lasan’olontsotra ny ampahan-tany mirefy 1 470 m2
Lasan’olontsotra ny zaridainan’Ankorondrano. Nitazam-potsiny ny kaominina izay tomponandraikitra voalohany amin’ny fitantanana ny zaridaina eto an-drenivohitra. Isany nanao sonia ny antontan-taratasy niaraka tamin’ny didim-pitsarana momba ny fampivarotana ny zaridaina anefa ny kaominina.
Jirama : mihenjan- droa ny tady eo amin’ny sendika sy ny mpitantana
Mitaky ny fialan'ny tale jeneraly eo anivon'ny Jirama ny sendikan’ny mpiasa ao amin’ity orinasam-panjakana ity. Manome 48 ora izy ireo amin'izany. Etsy ankilany, nilaza ny tomponandraikitry ny serasera ao amin'ny Jirama fa ny tsy fahazoan' ireo mpiasa tombontsoa manokana no anton'izao fitakiana izao.
Fitrandrahana fasimainty ataon’ny orinasa Base Toliara ao Atsimo Andrefana : tsy mbola milamina
Tonga eto Antananarivo ny solontenan'ireo mponina ao amin'ny foko Masikoro sy vezo any amin'ny faritra Atsimo Andrefana amin'izao fotoana izao, hiaona amin'ny tomponandraikim-panjakana noho ny raharaha Base Toliara. Tsy eken'izy ireo ny fanaovana letrezana hitrandrahana ny tanin'izy ireo.
Lalana “Arrêt 30” – Vatobe 67ha : vinavinaina ho vita afaka 40 andro
InfoKmada - 27 février 2019 0
Vinavinaina ho vita ao anatin’ny 40 andro ny fanamboaran-dalana etsy amin’ny arret 30, mihazo an’i Vatobe 67ha, raha ny nambaran’ny tomponandraikitry ny fanamboarana. Ny ministeran’ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy no tomponantoka. Orinasa tsy miankina kosa ny misahana ny asa fanamboarana.
Taratasy Antemoro : tsy marina ny filazana fa lasan’ny vahiny ny « Brevet »
Miha lany tamingana sy miha lafo ankehitriny ny Hodi-kazo « Havoa » izay isan’ireo akora fototra hanamboarana ny Taratasy Antemoro izay isany vakoka Malagasy. Mbola maro ireo fianakaviana no mivelona amin’ity asa ity ankehitriny.
MAE : mangataka ny hamerenana ireo « Passeport diplomatique » sy « Passeport de service » tsy ampiasaina intsony
Namoaka naoty mampatsiahy ny tokony hamerenan’ireo mpiasam-panjakana efa tsy tokony hampiasa intsony ny « Passeport diplomatique » sy ny « Passeport de service » ao anatin’ny 15 andro ny minisiteran’ny raharaham-bahiny Malagasy.
Praiminisitra NTSAY Christian : nandray ny iraky ny banky iraisampirenena
Ny mariana teo, nandray ny iraky ny banky iraisampirenena teny amin’ny lapan’i Mahazoarivo ny praiminisitra lehiben’ny goverenemanta. Fihaonana izay niresahan’izy ireo ny fanohizana fiaraha-miasa amin’ireo tetikasa iarahan’ny roa tonta ho fampandrosoana an’i Madagasikara.
Faritra Boeny : nisokatra androany ny fanjonona makamba
InfoKmada - 26 février 2019 0
Nisokatra nanomboka androany ny fotoam-panjonona makamba any amin’ny faritra Boeny. Isany mamono ny tsenan’ny makamba avy eto Madagasikara any amin’ny tsena iraisam-pirenena, ny fangalaran’ireo mpandraharaha manjono mialohan’ny fotoana voatondro.
Miakatra ny tahan’ny fandoavan-ketra eto Madagasikara saingy tsy mbola mahafa-po . Izay no fanazavan’ny tale jeneralin’ny hetra androany. Maro amin’ireo mpandraharaha no mbola ao anatin’ny tsy ara-dalàna. Hisy ny fanavaozana ho atao raha ny fanazavan’ny minisitry ny toekarena sy ny vola.